Galaxy Gio GT S5660 အား official 2.3.6 တင်ခြင်း ~ မြန်မာမိုဘိုင်းနည်းပညာ Galaxy Gio GT S5660 အား official 2.3.6 တင်ခြင်း
Home » ဖုန်းအတွက် Root လုပ်နည်းများ » Galaxy Gio GT S5660 အား official 2.3.6 တင်ခြင်း
Samsung galaxy gio သမားများအတွက် ဖန်းဝဲ ကျခဲ့သည် ရှိသော် မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်တင်နိုင်မယ့် နည်းလေး ကို ပြန်လည်မျှ ပေးလိုက်ပါတယ် ..
လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ ကို ဒေါင်းပါမယ် .
.Galaxy Gio firmware 2.3.6 အားရယူရန်
Odin v 1.85 အားရယူရန်
samsung driver အားရယူရန်
Driver ရယူပြီးပါက ကွန်မှာ ရမ်းလိုက်ပါ…
Firmwre ဖိုင်ကို ဇစ် ဖြေလိုက်ရင် …………….Code, MOden, CSC, Pit ဆိုပြီး ဖိုင်လေး ဖိုင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ..
Odin ကို ဇစ် ဖြေပြီး ကွန်မှာ ရမ်းပါ … ………ပြီးရင် Odin ရဲ့
PDA မှာ………………..firmware ဇစ် ဖြေထားတဲ့အထဲက code ဖိုင်ကို ရွေးပါ..
Phone ………………………………………………..moden ……..
pit………………………..pit မှန်အောင် ထည့်သွားပါ …
ပြီးရင် ဖုန်းကို ပိတ် .. download mode ၀င်ပါမယ်… vol - power home တွဲနှီ်ပ်ထားပါ …download mode ရောက်သွားပါမယ် ..
အပေါ်က ပုံအရ ဆိုရင် download mode ရောက်ပါပြီ… ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ ကွန်မှာထိုးလိုက်ပါ … Odin မှာ အောက်ပါအတိုင်းအရောင် လေး သမ်းပါလိမ့်မယ် ..
အရောင်လေး သမ်းပြီဆိုရင် ဆက်လုပ်လို့ရပါပြီ.. မသမ်းရင် ဆက်လုပ်လို့မရပါ .. Driver , USB ကြိုးပြန်စစ် ပြန်သွင်းရပါမယ် .
အရောင်လေး တက်လာပြီဆိုရင် Odin မှ Start ခလုတ်နှီ်ပ်လိုက်ပါ. သူ့ဟာသူ အလုပ် လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ..
ခဏကြာရင် odin မှာ PASS ပြပါမယ်.. အောက်ပါအတိုင်းပါ
ဖုန်းက reboot ကျသွားပါမယ်.. ကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ ..ဖုန်းပြန်တက်လာရင် firmware တင်ခြင်းပြီးပါပြီ.. ………logo မှာ ၀ဲလည်လည် လုပ်နေရင် ဖုန်းကို recovery mode ကို vol+ power home သို့ power home တွဲနှိပ် ၀င်ပါ ..ဒီပုံလေး လို ဖြစ်ပါတယ်. .
vol ခလုတ်နဲ့ ရွေးပြီး factory reset ချပေးလိုက်ပါ ပြီရင် reboot system now လုပ်လိုက်ပါ .. ပြန်တက်လာရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ.
ဖုန်း root လုပ်ခြင်း ကို ဒီနေရာ မှာ လေ့လာပါ .